Yini okusizayo ekulumezeni? - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke kanye Nomoya
Ikhaya>Inkinga ukulunywa>Yini okusizayo ekulumezeni?
Yini okusizayo ekulumezeni?Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-03T10:56:02+01:00
Ezigulini ukulunywa kuyinkinga enkulu kakhulu futhi kwehlisa izinga lempilo kakhulu. Kufanele ugweme ukuklwebheka, futhi lokhu kulula ukusho kunokukwenza. “Ngingayeka kanjani ukuziklwebha lapho kulume kangaka?” kubuza isiguli.
Gcina izinzipho zakho zisikiwe zaba mfushane kakhulu, bese ushaya indawo elumayo ngohlangothi lwensalela (phezulu) lwesandla.
Ukupholisa kukhulula ukulunywa. Ungasebenzisa amaphakethe apholile owagcina esiqandisini, kepha ukuthatha ishawa epholile eya kumakhaza nakho kungasiza kakhulu. Uma uhlushwa i-urticaria ebandayo, kufanele uzigweme lezi zinyathelo.
Ukushukumisa uhhafu wenkomishi ye-bicarbonate (isb. Impuphu yokubhaka) emanzini abandayo okugeza nokugeza imizuzu eyi-10 kungakhulula ukulunywa.
Ukuhlikihla isikhumba ngamanzi uviniga (isipuni esisodwa seviniga kwilitha elilodwa lamanzi) kungaletha ukukhululeka kwesikhashana.
Amakhilimu nama-gel aqukethe ama-antihistamine ahlanganisa umphumela wendawo we-antihistaminic nomphumela wokupholisa.
Ukhilimu / i-lotion equkethe u-5% kuye (ubuningi) 10% polidocanol, mhlawumbe ngokufakwa kwe-urea, inganciphisa ukulunywa kahle.
Ukusetshenziswa kuka-anyanisi noma amaconsi (amakhekhe) ngeke kusize ngalutho.
ICortisone oinments ayinamthelela ekulungeni.